BUHARI AGỌỌLA AGỤGỌỌ NA EBUBOO ANA EBO YA GBASARA IMEGIDE OTU OKPUKPERE ỤFỌDỤ – hoo!haa!!
BUHARI AGỌỌLA AGỤGỌỌ NA EBUBOO ANA EBO YA GBASARA IMEGIDE OTU OKPUKPERE ỤFỌDỤ
Onye isi ala bụ Mohammadu Buhari nọrọ na ụbọchị Tọsdee gara aga gọọ aka ya na ụkwụ ya na ebuboo ahụ ụfọdụ ndi mmadụ na-ebo ya sị na ọ na-akwado otu okpukpere ndi ụfọdụ ma na-eleda ndi ọzọ anya. Ọ sịrị na nkea abụghị eziokwu.
Ọsịrị na ndụ ya niile na onwebeghị mgbe ya ji-akpa agwa megidere iyi ọrụ ya ñụrụ. Okwuru nkea mgbe ona akpọkụ ndi ndu okpukpere di iche iche n’ala anyị ka ha na-akpa agwa ga na-akwalite udo na idị n’otu ala anyị ma hapụ ihe ga na-ewetara anyị nkewa.
Anyị ga-echeta na onye isi ụka dayọsisi nka sokoto bụ bishop Matthew Kukah nọrọ na nso nso a kwue na Buhari batara dike onye bu okpukpere chi nakwa emee emegwara n’obi nke mere na anyị na-alọhachị azụ n’ebe echere na anyị agafeela ma na-akwakwa anyị aka n’ebe ọdị ọjọọ dika otu mba.
Mgbe Buhari na-alabata ndi ozi otu ukaga si ngbago ugwu ala anyị kpọrọ onwe ha Arewa Pastors Non Denominational Initiative For Peace in Nigeria nke onye ndu ha bụ Bishop John Abu Richard, onye isi ala kwuru na ndi ndu okpukperechi nwere ọrọ gbara ọkpụrụkpụ igba mbọ ihụ na udo na-achị.
Ọ sịrị “ụfọdụ ndi mmadụ ji aha ụka nakwa nke agbụrụ onye si were na-ekwu okwu aghara aghara ekwugide gọmenti nakwa mụ na onwem gbasara ikwado otù otú uka ma na-eleda ndi ọzọ anya.”
Ọgara n’ihu si, “ka m gwa unu, na nkea abụghị eziokwu, n’ọnọdụm dịka onye agha, onye nhazi nakwa onye ndọrọ-ndọrọ ọchịchị, onweghị mgbe mụ ledara iyi ejiri dinyem ọrụ anya”.
Ọsịrị na mgbe ya chịrị obodoa dika onye agha na ndi otu Kraist ya jiri rụọ ọrụ karịrị ndi nke Alakuba n’ogbakọ Federal Executive Council nakwa nke Supreme Military Council.
Buharị sịrị na nkea abụghị n’ụdị ọnatara chị kama na ọbụ ya jiri aka ya tinye ndi ọrụ ndia, na-eleghi anya n’agbụrụ mọbụ okpukpe onye si.
Ọsịrị na-abịakwa na ndi ọrụ ya ugbua, na ya ji isọpụrụ mmụta nakwa ilezi anya nke onye nwere, were etinye ndi mmadụ n’ọrụ. Bụhari kwuputara ịhe ndia site n’onụ onye ndụm-ọdụ ya n’ihe gbasara mgbasa ozi bụ Femi Adesina.
Onye isi ala a gosipụtara obi ọma ya na atụm-atụa na-aga n’ihu ugbua maka ikpe ekpere nakwa ebum ọnụ, iji chọọ ọdị mma ala anyị, ma ọnwa anọ n’afọa dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na isii. Okwere nkwa na ya ga agwa onye isi ndi uwe ojii ka enye mmemmea ezigbo nchekwa.
N’okwu nke ya, onye ndu ndi otua siri na ihe karịrị ndi isi ụka dị puku iri anọ n’ise nke ngbago ugwu ala anyị edebanyela aha ha dika ndi ga-enyefe ebe nkwusa okwu Chukwa ha maka ikpe ekpere na izisa ozi udoa nke ga-enye aka megide iduhie ndọrọ-ndọrọ ọchịchị obodo ụzọ.
Onye ndua bụ Richard yọkwara ndi ndu ụka ndi ọzọ n’akụkụ ala anyị nile, ka ha nye aka kwado ọchịchị dị ugbua bụ nke ọsịrị na-agba mbọ iweta tigbue zọgbue dị n’akụkụ ala anyị dị iche iche ugbua na njedebe. Ọ yọkwara ha ka ha kwụsị ikwu ihe gbasara ndọrọ-ndọrọ ọchịchị obodo mgbe ha kwesiri ikwu okwu Chukwu.
Next Post: OYEGUN MERE TINUBU: EBE IMA NKEA, IMA NKE ỌZỌ – Kpodo